बिहिबारका प्रमुख खबरहरू : सरकारविरुद्ध बालुवाटारमा प्रदर्शनदेखी २५० काेराेना संक्रमित थपीएकाेसम्म
१. सरकारविरुद्ध बालुवाटारमा प्रदर्शन, प्रहरीद्वारा पानिकाे फाेहाेरा प्रहार
काेराेना भाइरसकाे नियन्त्रणमा सरकारले प्रभावकारि काम गर्न नसकेकाे भन्दै प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटार परिसरमा सरकारविरुद्ध प्रदर्शन भएको छ। प्रदर्शनकारीलाई नियन्त्रणमा लिन प्रहरीले पानीको फोहोरा तथा लाठि प्रहार गरेका थिए। कोरोना नियन्त्रण तथा औषधि उपकरण खरिदमा भएको खर्च पारदर्शी हुनुपर्ने, आरडीटी परीक्षण रोक्नुपर्ने, थोपरिएको कर खारेज गर्नुपर्नेलगायतका माग राखेका छन्। पछिल्लो तीन दिन यता लगातार बालुवाटारमा प्रदर्शन भैरहेको छ।
२.सर्वोच्चले भन्यो : बन्दाबन्दी खुलेको ३० दिनभित्र कर तिर्ने व्यवस्था गर्नु
सर्वोच्च अदालतले बन्दाबन्दी पूर्ण रुपमा खुलेकोपछि ३० दिनभित्र कर बुझाउन सक्ने गरी आवश्यक व्यवस्था मिलाउन सरकारका नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ। न्यायाधीशद्वय अनिलकुमार सिन्हा र मनोजकुमार शर्माको संयुक्त इजलासले बुधबार जारी गरेको आदेशमा बन्दाबन्दी खुलेपछि बाटोको म्याद बाहेक ३० दिनभित्र सम्बन्धित विवरण र कर बुझाउन सक्ने गरी व्यवस्था मिलाउन अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो।
३.आपराधिक घटनामा कमी आयो : गृह मन्त्रालय
मुलुकमा विगत वर्षको तुलनामा बन्दाबन्दीको समयमा आपराधिक घटनामा कमी आएको छ। नेपाल प्रहरीका अनुसार लकडाउनले गर्दा झण्डै ६० प्रतिशत आपराधिक घटना घटेको छ। तथ्याङ्कमा आत्महत्याका घटनामा समेत विगतको वर्षहरुमा भन्दा कमी आएको देखिएको छ। प्रहरीले केही कत्र्तव्य ज्यान तथा भवितव्यका घटना तथा घरभित्र हुने अपराध र जबर्जस्ती करणीका घटना घटेका जनाएको छ। रुकुमको सोती र रुपन्देहीको गाई फार्ममा गम्भीर प्रकृतिको घटना भएका छन्।
४.एसईई कानुनी रूपमा नै खारेज गरौं : गगन थापा
नेपाली कांग्रेसका नेता गगनकुमार थापाले माध्यामिक शिक्षा परीक्षा (एसईई) लाई कानुनी रुपमै खारेज गर्न माग गरेका छन्। बिहीबार सामाजिक सञ्जालमार्फत नेता थापाले सरकारले यस वर्ष एसईई परीक्षा नलिने र आन्तरिक मूल्यांकनबाटै आएको नतिजालाई मान्यता दिने निर्णय सही भएको बताएका छन्।
५. थप २ सय ५० जनामा संक्रमण पुष्टि, संक्रमितको संख्या ४ हजार ६ सय १४
२४ घण्टामा देशभर २ सय ५० जना कोरोनाभाइरसका नयाँ संक्रमित थपिएका छन्। योसँगै संक्रमितको संख्या ४ हजार ६ सय १४ पुगेको छ। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले बुधबारको नियमित प्रेस ब्रिफिङमा मन्त्रालयका प्रवक्ता डा जागेश्वर गौतमले आज थपिएका संक्रमितमा २३० जना पुरुष र २० जना महिला रहेको बताए । यस्तै संक्रमित मध्ये ४ हजार २ सय ८५ जना पुरुष र ३ सय २९ जना महिला छन्।
६. सुदूरपश्चिमका थप तीन स्थानमा पिसीआर राख्ने तयारी
उद्योग, वाणिज्य तथा आपू्र्तिमन्त्री लेखराज भट्टले विकास निर्माण अघि बढ्ने बताएका छन् । गेटा विमानस्थलमा आज सञ्चारकर्मीहरुसित कुरा गर्दै उनले सरकारले लकडाउन खुकुलो बनाएकाले कोरोनाका कारण रोकिएका विकास निर्माण अघि बढ्ने बताए। देशको अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन सरकारले लकडाउन खुकुलो बनाएको उनले बताए। उनले कोरोना परीक्षणका लागि सुदूरपश्चिमका थप तीन ठाउँमा पिसीआर मेसिन राख्ने तयारी सरकारले गरिरहेको बताए।
७.उडान तालिका सार्वजानिक
विदेशमा अलपत्र परेका नेपाली ल्याउन राष्ट्रिय ध्वजावाहक नेपाल वायुसेवा निगम (नेपाल एयरलाइन्स)ले आफ्ना उडानको कार्यतालिका सार्वजनिक गरेको छ। सरकारले विभिन्न मुलुकमा अलपत्र परेका करिब ३० हजार नेपाली जहाज चार्टर्ड गरेर ल्याउने निर्णय गरेसँगै निगमले जुन महिनाभर विभिन्न देशबाट गरिने चार्डर्ड उडानको कार्यतालिका बनाएको हो।
८. सरकारविरुद्ध बालुवाटारमा प्रदर्शन, प्रहरीद्वारा पानिकाे फाेहाेरा प्रहार
९. काठमाडौं आइपुगे कुबेतका ३ सय नेपाली
विदेशमा रहेका नेपाली उद्धार गर्ने क्रममा आज बिहीबार ३०० नेपाली कुवेतबाट नेपाल आइपुगेका छन्। कुवेतबाट दुवै जहाज काठमाडौंस्थित त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा अवतरण गरेकाे छ। दुइपटक गरेर एयरबस ए३२०–२५१एन दुई जहाजमा कुल ३ सय नेपालीहरु स्वदेश फर्किएका हुन्। नेपाली नागरिक लिएर जजिरा एयरवेजका जहाजहरु नेपाल आएका हाे।
१०.गण्डकी प्रदेशमा २७ डेङ्गु संक्रमित भेटिए
गण्डकी प्रदेशका छ जिल्लामा लामखुट्टेको टोकाइबाट सर्ने डेङ्गु रोगका बिरामी भेटिएका छन् । कोरोना भाइरसको जोखिमका बीच डेङ्गु र स्क्रब टाइफसको संक्रमणसमेत बढेको हो। हालसम्म ती जिल्लामा डेङ्गुका २७ बिरामी फेला परेका छन् भने म्याग्दीमा पाँच जनामा स्क्रब टाइफस देखिएको प्रदेश स्वास्थ्य निर्देशनालय पोखराले जनाएको छ। म्याग्दी र कास्कीमा सबैभन्दा बढी डेङ्गु संक्रमित भेटिएका छन्।
११. एकतोला सुनको मूल्य नब्बे हजारको हाराहारीमा
स्थानीय बजारमा सुनको मूल्यमा अनपेक्षितरुपमा वृद्धि भएको छ। आज बजार खुल्दा प्रतितोला पहेँलो धातुको मूल्य रु ८९ हजार ६०० कायम भई हालसम्मकै उच्च विन्दुमा पुगेको हो। नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासङ्घका अनुसार आज छापावाल सुनको मूल्य बुधबारको तुलनामा रु हजारले बढेका छ।
प्रकाशित मिति: बिहीबार, जेठ २९, २०७७ १९:२०